China Fe-Cr-Al aluminium ukwenziwa kunye nefektri | Shougang
Iialloys zeFe-Cr-Al yenye yezona zinto zisetyenziswa kakhulu kwiialloys zombane ekhaya nakumazwe aphesheya. Ibonakaliswe ngokungahambelani okuphezulu, ukungalingani kokushisa okuncinci, ukumelana ne-oxidation elungileyo, ubushushu obuphezulu njalo njalo. Ezi alloys zisetyenziswa ngokubanzi ekwenzeni izixhobo zokufudumeza imizi-mveliso kunye nezixhobo zokufudumeza zasekhaya.
Iialloys zeFe-Cr-Al yenye yezona zinto zisetyenziswa kakhulu kwiialloys zombane ekhaya nakumazwe aphesheya. Ibonakaliswe ngokungahambelani okuphezulu, ukungalingani kokushisa okuncinci, ukumelana ne-oxidation elungileyo, ubushushu obuphezulu njalo njalo. Ezi alloys zisetyenziswa ngokubanzi ekwenzeni izixhobo zokufudumeza imizi-mveliso kunye nezixhobo zokufudumeza zasekhaya. I-al-als zeFe-Cr-Al yenye yeemveliso eziphambili zenkampani yethu. Zonke iialloys zokumelana nobushushu ezenziwe yinkampani yethu zahlukile ngokwenziwa okufanayo, ukumelana okuphezulu, ubukhulu obuchanekileyo, ubomi obude bokusebenza kunye nokusebenza kakuhle. Abathengi banokukhetha ibakala elifanelekileyo ngokweemfuno ezahlukeneyo.
I-SG-GITANE'S ukumelana nocingo lokufudumeza i-0Cr25Al5 ifumene isihloko semveliso yebanga egqwesileyo kwi-China Ministry of Metallurgical Industry. Ngomnyaka we-1983, intambo yokuchasana kwenkampani ye-HRE inikezele ngexabiso lesibini lokuqhubela phambili kwenzululwazi kunye neteknoloji evela kuMasipala waseBeijing.
Umtya oshushu oshushu
Ukwenziwa kweMichiza kweeSinyithi ezingenasici
Ubushushu obuqhubekayo bokusebenza ℃
Into yeqondo lobushushu kwi-resistivityCt
Ukuxinana （g / cm3）
Indawo yokunyibilika (malunga.) (℃)
Uqine (nama.) （N / mm2）
Ulungiso kuphuka (nama.)%
Okulandelayo: Iialloys ze-Ni-Cr
I-FE CR AL yoBushushu boMbane oBushushu oPhezulu
FE CR AL Resistance High Wire
I-FE CR AL Resistance Alloys
FE CR AL Resistive Ubushushu Wire
YOKUTHANDA uphawu lophawu lwentambo
Ihowuliseyili Ubushushu Electrical Wire, Ubushushu Resistant Electrical Wire, Umbane oFudumeza umbane ngombane, Umbane wesiFudumezi, Ukuxhathisa ngombane, Ucingo lokuFudumeza ngombane,